Badonswe ngendlebe abalandeli ngeCarling Black Label Cup | News24
Durban – Kuyalwa abalandeli be-Orlando Pirates nabeKaizer Chiefs ngobumqoka bokubophela ngendlela isikimu emdlalweni obhekwe ngabomvu weCarling Black Label Champion Cup ozokuba ngoMgqibelo womhlaka-29 Julayi e-FNB Stadium, eNasrec, eGauteng.
ULucky “Phinda Mzala” Lekgwathi obengukaputeni weBucs inqoba izinkomishi ezintathu amasizini amabili elandelana, uthi kumqoka ukubheka abadlali onabo ngaphambi kokuhlela indlela ozobophela ngayo isikimu. Ngakolunye uhlangothi uSiyabonga “Doctor” Nkosi odlale amahlandla amabili kwiZimpofana, naye uthi abalandeli kumele babophele isikimu ngokubheka ubuthaka nokuqina kwabadlali babo.
ULekgwathi uthi bona badle izinkomishi eziyinqwaba besebenzisa i-4-4-2.
“Lolu hlelo belusebenza kithina ngoba besinabadlali abebeluqonda kahle futhi bengena khaxa kulona. Noma ngubani ubekwazi okumele akwenze kulolu hlelo. Uma sibhekene neChiefs besisuke sazi ukuthi iyathanda ukuqala ukudlala ibhola emuva iye phambili.
“I-4-4-2 ibiyenza sibe nabadlali abaningi esiswini bese siyicindezela, futhi singanqeni ukuhlasela ngoba besazi ukuthi siqinile emuva,” kusho uLekgwathi.
UNkosi uthi yena uluthanda kakhulu uhlelo lwe-4-2-3-1. Uthi lusebenza kuphela uma abadlali besemuva ezinhlangothini bekwazi ukushoshela ngamandla phambili futhi babuye ngokushesha bezovala izindawo zabo emuva, kubika ILANGA.
“Lolu hlelo luhle ngoba unabadlali abane emuva nabasheshayo ezinhlangothini phambili abenza kube lula ukuhlasela izitha.
“Luhle ngoba uba nomgadli oyedwa phambili bese kuthi odlala unombolo 10 abe wumgadli wesibili okunika amandla okuhlasela. Amakilabhu amaningi esikhathini samanje ancamela i-4-3-3.
“Okumqoka ukuhlela abadlali uhlelo abazokwazi ukuluqonda kahle ukuze bakusebenzele njengomqeqeshi,” kusho uNkosi osehlaziya unobhuntshuzwayo kwiSuperSport.
Abalandeli banikezwe izindlela ezine zokubophela isikimu okumele bazisebenzise kulo mqhudelwano, okuyi-4-4-2, i-3-5-2, i-4-3-3 ne-3-4-3.